I-NYPD isuka kwincwadi yokubhalela iye kwi-iPhone | IPhone iindaba
I-NYPD isuka kwincwadi yokubhalela iye kwi-iPhone
Ubudala bedijithali businceda ngezinto ezininzi, kwaye enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kukuba sikwazi ukugcina ephepheni kwaye sidibanise izinto ezazisakuba zizinto ezininzi kwenye: isixhobo sokubala, incwadana yokubhala, iskena ... Kwisebe lamaPolisa. INew York ibonakala ngathi iyayiqonda kwaye igqibe kwelokuba ithathe inyathelo elibalulekileyo lokuvelisa. Yile ndlela i-NYPD igqibe ngayo ukushiya incwadana yemveli ngasemva kwaye itshintshele kwi-iPhone ngesicelo sayo. Ngokuqinisekileyo imikhosi yezokhuseleko ikwaqhelana namaxesha amatsha asebenza ngeyona ndlela isebenzayo.
Uyiphatha kanjani ilayisensi yomqhubi kwi-iPhone
Ukusukela nge-17 ezayo kaFebruwari, bathatha isigqibo sokuyisusa ngokupheleleyo incwadana yokubhala iphepha eneepeni amapolisa aseNew York ahamba nazo kwizithuthi zabo ukuqala ukusebenzisa isicelo esithile sophuhliso lwabo. Kule "incwadana yokubhala" amapolisa abhala phantsi ukubanjwa kwabo, iinkcukacha zamaxhoba kunye nokuma kwabo ukutya, Kodwa ngoku baya kuba nayo ngakumbi kwaye baya kufumana ubumfihlo ngokutshintshela kuguqulelo lwedijithali lwe-iOS, njengoko kuchaziwe The New York Times kutsha nje.
Iipolisa ziya kufuneka zingene ukuze zibhale kule "incwadana yokubhala yedijithali" Ke umatshini omtsha ubuncinci ukhuseleke ngakumbi kunendala. E-Spain nathi siyaziqhelanisa nezi ndlela, isicelo esitsha se-miDGT siyakuvumela ukuba uphathe iphepha-mvume lakho kunye namaxwebhu ezithuthi kwi-iPhone yakho, uvelise uthotho lweekhowudi ze-QR ezinokufundwa zizixhobo zabasemagunyeni kwaye kuthintelwe ilahleko ngaloo ndlela. kunye nokuxoka kwamaxwebhu. Ayisiyonto intsha le kwiSebe lamaPolisa laseNew York nokuba, njengoko bebesebenzisa i-iPhone ukusukela ngo-2015.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-NYPD isuka kwincwadi yokubhalela iye kwi-iPhone
I-Apple Watch iyigqwesa yonke imveliso yokubukela eSwitzerland